१३ मंसिर २०७७, शनिबार १५:५६ English
व्यवसायीक कफीको जन्मदाता ढकेश्वर घिमिरेको संघर्ष र सफलता १० असार २०७६, मंगलवार १२:०१
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १० असार । सबै मानिसहरु आफ्नो कर्ममा सफल हुन्छन् भन्ने छैन । तर निरन्तरको लगाव, कामप्रतिको सम्मान र आत्मविश्वासले मानिसलाई सफल बनाउँछ । अटुट संघर्षबाट सफल भएकाहरुको कहानी आफ्नै छ । असफलताको लामो श्रृंखला पार गरेर सफल बनेका उदाहरणीय उद्यमीले श्रम, स्रोत र..
‘हिमालयन ट्राभल मार्ट पर्यटन क्षेत्रको कुम्भ मेला’ सिइओ बुडालसँगको अन्तरवार्ता २१ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १२:५३
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सन् २०१७ बाट हरेक वर्ष हिमालय ट्राभल मार्ट आयोजना हुँदै आएको छ । यसवर्ष पनि जुन ६ अर्थात् जेठ २३ देखि २६ सम्म मार्टको आयोजना हुँदैछ । मार्टले नेपाललाई हिमालय प्रवेशद्वारका रुपमा चिनाउने लक्ष्य लिएको छ । मार्टको आयोजना किन ? यसले नेपालको पर्यटनमा दिन सक्ने..
‘होमस्टे होटलको विकल्प होईन’ ६ बैशाख २०७६, शुक्रबार १६:२८
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ बैशाख । नेपालमा होमस्टेको इतिहाँस लामो छैन। यो अभियानले गति लिएको एक दशक पनि भएको छैन। ‘पर्यटनका लागि संगसंगैु भन्ने नारासहित ‘नेपाल पर्यटन वर्ष–२०११’ पश्चात नै होमस्टेले गति लिएको हो । त्यसो त कोहि पाहुनाको स्वागत सत्कार गर्नु नेपालीको संस्कार नै हो..
यहि समाज हो एउटा श्रीमती निकालेर अर्को श्रीमती भित्र्याउने २४ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १९:२५
महिलाहरुको लागि आफ्नो सारा समय अर्पेर समाज सेवामा सधै लागि पर्ने सोमा खत्री समुन्नत महिला मंचकी अध्यक्ष हुन् ।विगत ४ बर्षदेखि यस मंचमा अध्यक्ष भउकी उनी यस मंचलाई महासंघ बनाउन लागिपरेकीछिन् त्यसो त उनी नेपाल नारी चेतनशिल समाजको अध्यक्ष थिइन, १० बर्षसम्म चलाएको संस्थाको भर्खरै..
मरेकाले जल्ने अधिकार गुमाएको हेर्न सकिनँ :: रेखा थापा २५ बैशाख २०७२, शुक्रबार ०२:२५
फरक काम र शैलीका कारण बेलाबेला चर्चामा आउने अभिनेत्री रेखा थापाले यसपटक भूकम्पपीडितमाझ पनि बेग्लै उपस्थिति जनाइन् । पशुपति आर्यघाटमा आफन्तको दाहसंस्कार गर्न नसकेकालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै उनले सहयोगको बेग्लै पाटो उजागर गरिन् । एक पोका चाउचाउ दिएर फोटो खिचाई फेसबुकमा छाउन..
मिसन पूरा गर्न नसक्ने सरकारको के औचित्य ?: प्रदीप ज्ञवाली (सचिव, नेकपा एमाले) २४ फाल्गुन २०७१, आईतवार २१:२६
० सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेससँग एमालेको सम्बन्ध चिसिएको हो ? – काङ्ग्रेससँग सम्बन्ध चिसिएको होइन । तर, गत तीन सातादेखि संविधानसभाको बैठक अवरुद्ध छ । बैठक कहिले डाकिन्छ र अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराको टुङ्गो छैन । प्रधानमन्त्रीले दुई–दुईपटक..
प्रचण्ड र विप्लवको प्रवृत्ति एउटै हो, माघ आठमा पाइन्न, पाए पनि चाहिन्न :: मोहन वैद्य १७ पुष २०७१, बिहीबार १३:०७
० नेत्रविक्रम चन्दले तपाईंजस्ता नेतालाई छोड्नुभयो, किन होला ? – मोहन वैद्य भन्ने व्यक्ति मन नपरेर उहाँले हाम्रो साथ छोड्नुभयो होला जस्तो लाग्दैन, तर उहाँ यतिबेला हामीबाट अलग रहेको घोषणा गर्नुभएको छ । मलाई लाग्छ– उहाँले अलिक हतार गर्नुभयो । नेतृत्वको लागि यसरी हतारिनु आवश्यक थिएन ।..
जातीय राज्य मागेर अशान्ति मच्चाउनेसँग हामी सहमत छैनौं :: राजकुमार लेखी १४ मंसिर २०७१, आईतवार १०:५१
० तपाईंको भाषण त निकै उग्र भयो, आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई फुटाउन खोज्नुभयो भन्ने प्रतिक्रिया आए नि? –मैले आजै पनि केही साथीहरूका प्रतिक्रिया सुने। उहाँहरूले मलाई किन यस्तो बोलेको, एकजुट हुने बेलामा किन फुटाउन खोजेको भन्नुभयो। तर, वास्तविकता त्यसो होइन। मैले धेरैलाई प्रष्ट पारेको..